DEGDEG: Xukuumadda Puntland oo si rasmiya uga baaqsatay Shirkii Madaxda Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada Dalk | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii DEGDEG: Xukuumadda Puntland oo si rasmiya uga baaqsatay Shirkii Madaxda Dowladda...
DEGDEG: Xukuumadda Puntland oo si rasmiya uga baaqsatay Shirkii Madaxda Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada Dalk
Maamulka Puntland ayaa si rasmiya uga baaqsatay Shirkii Madaxda Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada Dalka oo sida qorshaysan 5-ta bisha soo socota ee July ka qabsoomi lahaaa Magaalada Muqdisho.
Ilo’ xog-ogaal ah ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in Xukuumadda Puntland ay gebi ahaanba Shirkaasi ka baaqsatay islamarkaana ay soo saari doonto War-saxaafadeed si faahfaahsan uga hadlaya sababaha ay uga baaqsatay Shirka.
Sidoo kale Baarlamanka Puntland ayaa waxa haatan u socda Kulan deg deg ah oo ku saabsan Go’aankii laga qaadan lahaa Arrimaha Siyaasadda Soomaaliya iyo Doorashada soo socota kadib markii Golaha Shacabku ansixiyeen Xeerka Matalaadda Gobolka Banaadir.
Waxaanse weli caddayn Go’aanka Baarlamanka Puntland uu ka qaadan doono Arrimaha Siyaasadeed ee ka socda Muqdisho iyo sidoo kale Doorashada Madaxtinimada ee 2020/21.
Xigasho Puntland Post
Previous articleMuuse Biixi xilalka ka xayuubiyey qaar badan halka kuwa Cusub uu magacaabay
Next articleBaarlamanka Puntland ayaa go’aano ka soo saaray Xaaladda Doorashada iyo Matalaadda Gobolka Banaadir
Sargaal sare oo ka Tirsan Ciidanka oo Gurgiisa oo ku yaaalo...
Kulan Loogu mahad celinaayay Hay’adda Hormuud Salaam Foundation oo ka dhacay...